हस्तलिखित ग्रन्थ जतन सुरु- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
ताडपत्र र रूखका बोक्रामा रहेका लेखोटको ढुसी सफाइदेखि पदक्रम मिलाएर नम्बर दिँदै जतन गरिँदै
फाल्गुन ६, २०७७ गणेश राई
काठमाडौँ — जब कागज बनेको थिएन, त्यस बेला पनि लेखपढको काम हुन्थ्यो । मानिसहरू रूखका बोक्रामा लेख्थे । त्यस्ता पुरातात्त्विक महत्त्वका लेखोट त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयमा छन् । करिब पाँच सय वर्ष पुराना हस्तलिखित ग्रन्थहरू अब सफाइ गरेर नम्बर मिलाउँदै पुस्तकालयमा संरक्षणको काम भइरहेको छ ।
कतिपय दुर्लभ कृतिहरू धुजाधुजा हुन थालेपछि पुस्तकालयले संरक्षणको काम अघि बढाएको हो । अधिकांश ग्रन्थ कालो मसीले बाक्लो कागजमा लेखिएका छन् । ताडपत्र र काठको बोक्रामा लेखिएका छन् । कतिपय बाँसको पट्याँसमा पनि लेखिएका छन् । सबै ग्रन्थ पाना–पाना गरी खप्ट्याएर राखिएका छन् । एउटै पानाको दुवै पातोमा अक्षर लेखिएका छन् । पुराना यस्ता लेखोट एउटा पानाको एकातर्फ पहेंलो र अर्कोतर्फ सादा छ ।
‘किरा नलागोस् भनेर हरिताल दलेर राखिएको हुनेरहेछ,’ पहेंलो भागको चर्चा गर्दै संरक्षणमा संलग्न संरक्षण सहायक केदार घिमिरे भन्छन्, ‘एकपछि अर्को पाना खप्टाएर राख्दा दुवैतिर पहेंलो भाग पर्दोरहेछ । त्यसैले किरा लाग्नबाट जोगिँदोरहेछ ।’ यसरी जोगाइएका ६ सय ५० भन्दा बढी हस्तलिखित ग्रन्थ छन् ।
ती ग्रन्थहरू पाना–पानामा पढिने र राख्दा भाँचिन नदिन एकातर्फ अग्राख काठको पातलो फल्याक ग्रन्थकै आकारमा मिलाएर खप्टाइएका छन् । त्यसलाई रंगीविरंगी कपडामा बेरेर राखिएका छन् । ती सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केन्द्रीय पुस्तकालयका र्‍याकमा छन् । बेलाबखत अध्येता आएर पढ्छन् । नत्र पोकाको पोकामै थिए । ‘यहाँ तीन सयदेखि पाँच सय वर्षका हस्तलिखित ग्रन्थ छन्,’ पुस्तकालय प्रमुख पूर्णलाल श्रेष्ठले भने, ‘त्यसयताका हस्तलिखित ग्रन्थ पनि छन्, जसमा डिल्लीरमण रेग्मी लिखित ग्रन्थ धेरै सेरिजमा छन् ।’
त्रिवि र जर्मनीको ह्याम्बर्ग युनिभर्सिटीअन्तर्गत हस्तलिखित ग्रन्थ संस्कृति अध्ययन केन्द्रबीच सम्झौता भएअनुसार संरक्षण काम सुरु भएको छ । केन्द्रका तर्फबाट डा. विदुर भट्टराई नेतृत्वमा ‘हस्तलिखित ग्रन्थ संग्रह संरक्षण’ कार्य थालिएको हो । संरक्षण कार्यमा त्रिविका बबिता सिंह र पार्वती पाठक तथा अध्ययन केन्द्रबाट तेजमाया महर्जन र केदार घिमिरे दैनिक खटिँदै आएका छन् ।
यी ग्रन्थ फरक शताब्दीका मात्र होइनन्, फरक–फरक भाषा, फरक–फरक लिपि र विषयका छन् । आयुर्वेद, भोट भाषा कागज, बौद्ध धरानी, बौद्ध सूत्र, दर्शन, धर्म, गाथा, गीता, हिन्दु धर्म, स्तोत्र, सूत्र, तन्त्र र टीका छन् । यसैगरी इतिहास, ज्योतिष, कथा, काव्य साहित्य, किराँत पुस्तक, महाभारत, महात्म्य, मन्त्र, रामायण, संहिता, पुराण, स्मृति, उपनिषद्, वंशावली, वास्तुशास्त्र, वेदवेदान्त, विविविधान, व्याकरण, योगा, युद्धशास्त्रलगायत छन् । अधिकांश नेपाली, संस्कृत, हिन्दी, मैथिली, नेपालभाषाका छन् भने किराँत पुस्तक किराँत लिपिका माध्यमबाट लिम्बू भाषामा लेखिएका छन् ।
स्याहार्ने काइदा भने नयाँ छ । संरक्षणकर्मीले होसियारीका साथ ग्रन्थका पोकाहरू आलोपालो खोल्छन् । हस्तलिखित ग्रन्थहरूको अवस्था बुझ्छन् । सबैको आँखा अक्षरको स्थितिमा पर्छ । ‘अक्षर मेटिने भए त्यसलाई संवेदनशील छ भनेर बुझ्छौं,’ संरक्षण सहायक घिमिरेले भने, ‘भ्याकुम प्रयोग गर्ने कि ब्रस गरेर अक्षरमा लागेको ढुसी फाल्न सकिन्छ । यदि ब्रस प्रयोग गर्दा अक्षर मेटिन्छ भने होसियारी अपनाउँछौं ।’
ग्रन्थको दुवै पातोमा लागेको ढुसी ब्रसले हटाउने वा भ्याकुमले तानेर सफा पार्छन् । सफा देखिएपछि विगतमा राखेकै पोकाजसरी नयाँ नेपाली कागजले बेर्छन् । नयाँ सुतीको सेतो कपडामा पोको पार्छन् । त्यो पोकालाई ‘इफ्लुट बोर्ड बक्स’ मा राख्छन् । त्यसलाई बाहिरबाट चिनिने गरी लेबल नम्बर टाँस्छन् । त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयमा ६ सय ५० वटाभन्दा बढी हस्तलिखित ग्रन्थ छन् । अहिलेसम्म १ सय २० ग्रन्थ सफा गरिएको छ । त्यसमध्ये ५० वटा बक्समा राखिएको र १५ वटा बक्स लेभलिङ गरिएको संरक्षण सहायक घिमिरे जनाए ।
प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ २१:१०
नमुना स्कुल बन्दै कान्ति भैरव
काठमाडौँ — भारत सरकारको लगानीमा काठमाडौं थलीको कान्ति भैरव माध्यमिक विद्यालय लिफ्टसहितको अत्याधुनिक बन्ने भएको छ । तीन तले ३० वटा कक्षा कोठासहितको भवन बनाउन लागिएको हो ।
भवनको बिहीबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र भारतीय राजदूतावासका नियोग उप–प्रमुख नामग्य सी. खम्पाले शिलान्यास गरेका हुन् । २६ करोडको लागतमा विद्यालय भवन बनाउन लागिएको आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख रामशरण सापकोटाले बताए । तीन तले भवनमा ३० वटा कक्षा कोठा, पुस्तकालय र प्रयोगशाला/अभ्यास कक्षका साथै छात्र तथा छात्राका लागि छुट्टै सरसफाई संरचनाको व्यवस्था हुनेछ । विद्यालयहरु निर्माणका लागि भारतको केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान (सीबीआरआई) र रुड्कीले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने भारतीय दूतावासले जनाएको छ । सीबीआरआई भूकम्प प्रतिरोधी पुनर्निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत संस्थान हो ।
पुनर्निर्माणका सीईओ ज्ञवालीले यो विद्यालय मुलुककै नमुना बन्ने बताए । ‘भूकम्पबाट जति क्षति भएको विद्यालय थिए ८१ प्रतिशत निर्माण भइसक्यो,’उनले भने,‘जग्गा र विद्यार्थी पर्याप्त भएको विद्यालय नमुना बनाएका छ । यस मध्येको यो पनि पर्छ ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सम्पदा तथा आवास क्षेत्रमा पुनर्निर्माण परियोजनाका लागि भारत सरकारले २ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शिक्षा क्षेत्रका लागि भारतको ५० मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिबद्घता रहेको छ । यस सहयोगअन्तर्गत नेपालका आठ जिल्लामा ०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका ७१ वटा शैक्षिक संस्थाहरुको पुनर्निर्माण भइरहेको दूतावासले जनाएको छ । गोरखा र नुवाकोटमा ८ वटा विद्यालयहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र ५६ वटा विद्यालयहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सी. खम्पाले बताइन् ।
६ वटा माध्यमिक विद्यालय निर्माणका लागि भारतीय राजदूतावास र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) बीच एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भारतले काठमाडौंको कान्ति भैरव माध्यमिक विद्यालय, चम्पादेवी माध्यमिक विद्यालय, धापासी माध्यमिक विद्यालय, विष्णुदेवी माध्यमिक विद्यालय गरी चारवटा विद्यालय बनाउन लागेको हो । त्यस्तै काभ्रेको सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय र हरिसिद्घि माध्यमिक विद्यालय पनि भारतकै आर्थिक सहयोगमा बन्न लागेको हो ।
शिलान्यास कार्यक्रममा नियोग उपप्रमुख खम्पाले भारत र नेपालबीचको बलियो र सशक्त विकास साझेदारी यस परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रमले चरितार्थ गरेको बताइन् । नेपालमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण परियोजनालगायत नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा हातेमालो गर्दै दुई देशबीचको सहकार्यलाई अघि बढाउन भारत सदैव प्रतिबद्घ रहेको उनले बताइन् ।
ज्ञवालीले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेका प्रतिबद्धता जुटाउन सफल भएको बताए । ‘कसैको कम र कसैको बढी होला । तर, पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको प्रतिबद्ध गरेको रकम सतप्रतिशत ल्याउने मुलुकमा परिचचित भएको छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ २०:५०